ASUS K450V Series Superb Choice Battery-4 ~ ICT.com.mm
HomeASUS K450V Series Superb Choice Battery-4
ASUS K450V Series Superb Choice Battery-4
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။Asus အမှတ်တံဆိပ် K450V Series Superb Choice လက်ပ်တော့ Battery ဖြစ်ပါတယ်။ အရည်အသွေးမြင့် လစ်သီယမ်အိုင်းယွန်းနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့4Cell ဘတ္ထရီအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ပါဝါ 14.4V ဖြစ်ပြီး ဘတ္ထရီအား 2200mAh ဖြစ်ပါတယ်။ Asus မှ တိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ဘတ္ထရီဖြစ်ပါတယ်။ မိမိ လက်ပ်တော့ပ်ရဲ့ မော်ဒယ်နံပါတ်နဲ့ ဘတ္ထရီသတ်မှတ်ချက်ကို တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးပြီး... [Learn more]
Brand: ASUSFilter by: Batteries, Best Secret Service, Laptop Batteries, USD
Asus အမှတ်တံဆိပ် K450V Series Superb Choice လက်ပ်တော့ Battery ဖြစ်ပါတယ်။ အရည်အသွေးမြင့် လစ်သီယမ်အိုင်းယွန်းနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့4Cell ဘတ္ထရီအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ပါဝါ 14.4V ဖြစ်ပြီး ဘတ္ထရီအား 2200mAh ဖြစ်ပါတယ်။ Asus မှ တိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ဘတ္ထရီဖြစ်ပါတယ်။ မိမိ လက်ပ်တော့ပ်ရဲ့ မော်ဒယ်နံပါတ်နဲ့ ဘတ္ထရီသတ်မှတ်ချက်ကို တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးပြီး တပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
High quality brand-new Li-ion battery,14.4V,2200mAh,4 cells, 30-Day Money Back Guarantee, OEM compatible! High capacity battery certified by CE and RoHS. Guaranteed to meet or exceed OEM specifications, Before purchase please make sure all the technical specifications and the model No match with your laptop battery.